Tobim-pako Jeneraly Red Lid - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny dabam-pako amin'ny ankapobeny dia ho an'ny ankamaroan'ny entana tsy azo apetraka ao amin'ny dabam-pambolenao sy ny zavamaniry zaridaina.
Natao ho an'ny fako amin'ny ankapobeny ihany ny dabam-baravaranao mena. Angonina isan-kerinandro ity daba ity.
Ireto manaraka ireto dia azo apetraka ao amin'ny dabam-pako ankapoben'ny sarony mena:
Ity manaraka ity dia azo apetraka ao amin'ny dabam-pako ankapoben'ny sarony mena
Globe maivana sy Pyrex
Fako mifangaro hafa
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-pako ankapoben'ny sarony mena:
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-pako ankapoben'ny sarony mena
Loko sy menaka
Raha toa ianao ka mametraka ireo zavatra diso ao anaty dabam-pako ankapobeny dia mety tsy ho voaangona izany.
Soso-kevitra ankapobeny momba ny fako
Andramo ireto torohevitra manaraka ireto mba hahazoana antoka fa tsy misy fofona:
Mampiasà fako fako mba hitehirizana ny fako alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny dabam-pako ankapobeny ary ataovy izay hamatotra azy ireo
Atsaharo ny sakafo fako toy ny hena, trondro ary akorandriaka. Apetraho ao anaty koba izy ireo ny alina alohan'ny fanangonana. Izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny bakteria manimba ny sakafo ka mahatonga ny fofona
Andramo ny mampiasa harona napy biodegradable deodorise mba hanariana tady
Ataovy azo antoka fa tsy feno loatra ny kobanao ary mihidy tsara ny sarony
Raha azo atao dia tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka ny kobanao ary eo ambanin'ny sarony rehefa avy ny orana
Inona no mitranga amin'ny fako amin'ny ankapobeny?
Isan-kerinandro, angonin'ny Cleanaway ny dabam-pako ankapobeny ary entina mivantana any amin'ny toerana fanariam-pako ao amin'ny Tobim-pitantanana ny fako ao Buttonderry sy ny Tobim-pitantanana ny fako ao Woy Woy. Eto, ny fako dia midina eny amin'ny toerana ary mitantana amin'ny alàlan'ny fanariam-pako. Hijanona ao mandrakizay ireo entana entina any amin’ny fanariam-pako, tsy misy fanasokajiana intsony ireo entana ireo.